အကြောင်းရင်းများ: Charity + Facebook = WIN! | Martech Zone
ငါက Facebook ကိုဝါသနာမဟုတ်ပါဘူး, သောဖြစ်ကောင်းမကြာမီအချိန်မရွေးပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ ဘယ်လောက်အကြိမ်ငါအကြိမ်ကြိမ်ပဲမေးပါစေပျောက်ကွယ်သွားမည့်ရယ်စရာကောင်းသောကြော်ငြာများမှအပ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖန်သားပြင်တွင်ကြည့်ပါ) ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်ပိတ်ထားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုသူတို့၏ပလက်ဖောင်းအတွင်းတွင်ဖြစ်ပျက်စေလိုသည်။
၎င်းသည်အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး AOL နှင့် MySpace မှသင်ခန်းစာယူသင့်သည်။ ငါ့စာအုပ်ထဲမှာ တွစ်တာ ပွင့်လင်းမှုနှင့်ပေါင်းစည်းမှုအတွက်မဆုတ်မနစ်သောတွန်းအားသည်နောက်ဆုံးတွင်ဖေ့စ်ဘွတ်နှင့်၎င်း၏ကြော်ငြာများကိုကျော်လွန်သွားလိမ့်မည်။ မနက်ဖန်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုပိတ်လိုက်လျှင်ဆိုရှယ်မီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းများစွာသည်စောင့်ဆိုင်းရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ အကယ်၍ မနက်ဖြန်တွစ်တာကိုပိတ်လိုက်ပါကရာပေါင်းများစွာသောကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုကယ်ဆယ်ရန်လာရန်လိုအပ်သည်။
ထိုအရာကကျွန်ုပ်၏ Facebook နှင့် ပတ်သတ်၍ updates များကိုဆက်လက်တွန်းအားပေးနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ကွန်ယက်များသည်ကျွန်ုပ်ကိုလေးစားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကစျေးကွက်သမားအားလုံးအတွက်အရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာဟာမင်းအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး!
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီရဲ့အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်ပါတယ် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်အကြောင်းတရားများကိုမြှင့်တင်ရန်မယုံနိုင်လောက်အောင်တတိယပါတီလျှောက်လွှာ အကြောင်းရင်းများအားလုံးရှိသည် တစ်စိတ်ကူးလူမှုမီဒီယာ application ကို၏ဒြပ်စင်။ ၎င်းတို့သည်ကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပေါင်းစည်းနိုင်စွမ်းကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကုသိုလ်ဖြစ်လှူဒါန်းခြင်းသည်ကော်ပိုရေးရှင်းအားလုံးအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည် - ဤလျှောက်လွှာသည်ထိုကုမ္ပဏီများအားသူတို့၏ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုကိုအလွယ်တကူရောင်းချရန်ခွင့်ပြုသည်။
အကြောင်းရင်းများသည်မည်သူကိုမဆိုကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်ရှိသူသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုအားဖြင့်ကမ္ဘာ့အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု၍ တစ် ဦး ချင်းစီသည် ၄ ​​င်းတို့၏အဆက်အသွယ်များကွန်ယက်ကိုရေရှည်တည်တံ့သည့်လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများတိုးပွားလာစေသည်။ အကြောင်းရင်းများဘလော့ဂ်မှ။
Causes ကို Sean Parker နှင့် Joe Green တို့ကပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သည်။ Causes ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်ခြင်းအပြင် Sean သည်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာမိတ်ဖက်လည်းဖြစ်သည် တည်ထောင်သူရန်ပုံငွေ။ ယခင် Sean သည် Napster, Plaxo နှင့် Facebook ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ ဂျိုးသည်အောက်ခြေလူထုစည်းရုံးရေးနောက်ခံမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပြီးမြို့တော်၊ ပြည်နယ်နှင့်အမျိုးသားအဆင့်တွင်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်မြေပြင်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏လှူဒါန်းမှုကိုလက်ခံရန်နှင့်လှူဒါန်းရန်လက်ခံလိုပါကအကြောင်းရင်းများသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ Causes Partner စင်တာတွင် Causes နှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်ကို Facebook Causes နှင့်မိတ်ဆက်ပေးသော Woody Collins အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Woody ဟာသူမအားကိုးအားထားနဲ့ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရင်းမယုံနိုင်လောက်တဲ့လူသားတစ်ယောက်ပါ ကွန်ဂိုနိုင်ငံတွင်အလွန်အမင်းဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်။ သင်အကြောင်းအရင်းများကို မသိ၍ ဤ post ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းမရှိပါကသေချာအောင်လုပ်ပါ Woody ၏မွေးနေ့ဆန္ဒကိုလှူဒါန်းပါ!
Tags: ကုသိုလ်ဖြစ်လှူဒါန်းမှုများမေတ္တာFacebook ကFacebook ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်Facebook ချစ်ခြင်းမေတ္တာnon-profit
သင့် Blog ကိုဘယ်လိုရွှေ့ပြောင်းပြီး Search Momentum ကိုဆက်လုပ်မလဲ
5:2010 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 2, 09
“ မနက်ဖန်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းဒါဇင်ပေါင်းများစွာရှိနေပြီ။ မနက်ဖြန်မှာတွစ်တာပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးကုမ္ပဏီရာနဲ့ချီပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။ ”
ဒါကအဓိပ္ပာယ်အများကြီးလုပ်မထားဘူး။ တွစ်တာတွင်ပြုလုပ်သောငွေပမာဏအတိုင်း Facebook ပေါ်ရှိငွေပမာဏ။ Farmville သည်တွစ်တာထက်ပိုပြီးလုပ်ခြင်းနှင့် Twitter ရှိကုမ္ပဏီအများစုသည်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အိုကေတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့🙂ဒါပေမယ့်အလေးအနက်ထားရမယ်၊ Facebook ကတွစ်တာထက်ပိုပြီးအားကောင်းပြီးအားကောင်းတဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်နေတယ်။ မနက်ဖြန်တွစ်တာပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုရင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားတွေကသာမြှင့်တင်ပေးမှာပဲ။ အကယ်၍ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပျောက်ကွယ်သွားလျှင်ကျွန်ုပ်၏မိသားစု ၀ င်ငယ်ငယ်များမှမောင်နှမများအထိ၊ မိဘများထံသို့အဘိုးအဘွားများထံမှလူတိုင်းပျက်စီးလိမ့်မည်။ ဘယ်တစ်ခုကပိုပြီးတည်မြဲတဲ့တန်ဖိုးကိုတည်ဆောက်နေတယ်ဆိုတာငါ့ကိုတစ်ခုတည်းပြောပြတယ်။